Izinkundla zemicimbi nezinsiza eSun City Resort - eNingizimu Afrika
Sun City Conferencing
Izinkundla zemicimbi nezinsiza eSun City
I-Sun City Resort eNingizimu Afrika
Ukuxhumana enkundleni e-Sun City
I-Sun City Resort eNingizimu Afrika inikeza izinhlobo ezihlukahlukene ezikhethekile zokubhuka kanye nezindawo zezingqungquthela ezihlanganiswe nokuhlala nokuzijabulisa ngezinombolo ezinkulu zezihambeli. Amaklayenti anezindawo eziningi zokubhuka, amakamelo okuphuza kanye nezindawo zokuzikhethela ezizokhethwa kuzo, kufaka phakathi i-superbowl enamandla ehlezi abantu abangaphezu kuka-6 000. Izakhiwo ezijabulisayo zingahlelwe ukuhambisana nanoma yisiphi isenzakalo kokubili ngaphakathi nangaphandle.
Izihambeli zezinkomfa zingakujabulela ukubukwa kwemidlalo emihle kakhulu ye-Big Five kanye nemifula e-Pilanesberg National Park, ngaphandle kwe-Elephant emuva safari noma ukujabulela ukudla kwenkampani kwendabuko yezintambo ngaphansi kwezinkanyezi. Isakhiwo se-Sun City neCasino sinamahhotela amane, ukuthutha izindawo zokuzijabulisa, ukuzijabulisa kwabaneminyaka yonke nokudlala kwekilasi lokuqala. Indawo yokubhuka isendaweni yesiqhingi seNyakatho Ntshonalanga, eNingizimu Afrika, ku-187 km / 116 miles ukusuka eGoli.
Ukuze ukhetho lwengqungquthela lwangaphambi nangemva kokuthunyelwe, izihambeli eSan City Resort zikwazi ukufinyelela ekukhethweni okukhulu kwemisebenzi yokuzilibazisa kubandakanya imibukiso ebukhoma namafilimu. Lonke indawo ehambelayo inikeza i-Gary Player emibili eklanyelwe izifundo zokuqhubela igalofu, amathuba emidlalo, i-Spa, izindawo zokuzilibazisa ezijabulisayo nazo zonke izinhlobo zokudla kanye nezitolo zokuthenga. I-Valley of the Waves iyisici esivelele seLost City engaqondakali futhi enye yezindawo eziphambili kakhulu emaphakathini emhlabeni. Izihambeli ezinemindeni zizothola nezinkampani ezinhle zezingane kanye nokunakekelwa kwengane kuyatholakala.
Izindawo zezingqungquthela zeSun City Resort zibukezwa
Isikhungo sezokuzijabulisa esise-Sun City
Breakaway Rooms - 10 to 90 delegates in 13 rooms
Hall of Treasures - 700 delegates for cocktails (also used as an exhibition venue)
Pilanesberg Room - 800 delegates for cocktails or 600 for a banquet
Royal Ballroom - 1 200 delegates in conference style seating or 800 for a banquet
Superbowl - 6 855 delegates seated for a show or up to 10 500 with standing room
I-Sun City Hhotela
Ama-Baobab, ama-Acacia ne-Jacaranda amakamelo ezinkomfa
Lawa makamelo aguquguqukayo angakwazi ukuhlala abahambeli abangu-360 endaweni yokuhlala yenkomfa noma ama-650 we-cocktails.
Isikhungo Senkomfa sase-Letsatsi
Lesi sikhungo sithuthukisiwe ngokugcwele nazo zonke izintambo zakamuva ezifaka amaphuzu enethiwekhi yezingcingo kanye namaphoyinti ekhompiyutha. Kukhona ukwamukela, indawo yokuhlala, amakamelo ezinkomfa eziningana nezindawo zamabhodi, ezingabamba izihambeli ezingu-160.
I-Sun City Theatre
Le ndawo ibuyele kabili njengehholo elingabamba izithunywa ezingu-620. I-Terrace Indawo yokudlela ye-Terrace ne-pool yenza lezi zindawo ezinhle, zinikeza izinketho ezihlukahlukene zokudla noma ukudlala ama-cocktail abantu abangaba ngu-600 no-500 ngokulandelana.
I-Palace of the Lost City
I-Baobab Outlook (ibukeka ngaphandle) - izithunywa ezingu-110 ze-dinner noma 150 ze-cocktails.
Igumbi leBhodi lomkhandlu - izithunywa ezingu-14.
Inkundla yokhlangana kwe bhodi- eBusiness Centre ehlezi izihambeli ezingu-10.
I-protea ne-Orchid - izihambeli ezingu-80 ekamelweni ngalinye kwisitoreji sesitayela se-cinema.
I-Royal Chambers - izihambeli ezingu-120 ezihlalweni zezitayela zenkomfa noma 80 zedili.
I-Cascades HHotelA ne- Cabanas
I-Cabanas Boardroom - izithunywa ezingu-12.
I-Cabanas Palm Terrace Restaurant - izinketho ezahlukene ngaphakathi nangaphandle kwemisebenzi yeqembu
Kuqhutshwa iBhodi ku-2nd floor - izithunywa ezingu-8.
Kuqhutshwa i-Boardroom ye-4 yesitezi - izithunywa ezingu-10 etafuleni noma 20 ezungeze ekamelweni.
Indawo zangaphandle zokuzijabulisa
I-Botsalanong Boma ne-Letsatsing Boma
Lezi zindawo ezivulekile zinikeza izindawo zokungcebeleka zasendaweni zangaphandle ezungeze umlilo ovulekile nabadansa bamasiko kanye nezinketho eziyingqayizivele yokudlela noma ibhabeque.
Le ndawo eboshiwe esibhekene ne-waterhole i-Letsatsing Game Park. Kuze kube ngu-65 izivakashi zingakujabulela ukudla kwesidla kanye nama-dinner ngenkathi zibuka iNdlovu emgodini wokuphuza.
Emaqenjini angabantu abangaba ngu-80 ohlelweni oluhlelekile, lesi sitayela sesitayela sasekhaya siphumelele emasikweni emini futhi sisekungeneni kweSun City.
Vula nsuku zonke, le ndawo yokudlela yase-township nebhasi inesigaba esingasetshenziswa imisebenzi yangasese.
I-Royal Observatory Deck
Le ndawo yokudla kwasekudleni ibuka iRoyal Bath eMfuleni wamaWavu futhi ingahlala kubantu abangaba ngu-350 noma 550 ukuze i-cocktails.
I-Valley of the Waves amabhishi
Indawo ephokozelayo yeqembu elwandle, kuze kufike ku-1 000 ingahlala noma kukhona ibhishi elincane, elingasese elikhona kubantu abangu-100.
Esikhungweni Sokuzijabulisa, le ndawo yasemoyeni yabantu abangaba ngu-200 inokukhanya okukhulu nokukhanyisa izibani.
I-Cabanas Emagqabeni Okupakisha
Abantu abangaba ngu-600 bangajabulela isidlo sepikiniki ngaseMountainworld futhi kuze kube ngu-200 bangahlala emanzini eduze kwechibi.
Ibhasi lokuhamba ngehora lamahora angu-24 elihamba phakathi kwehhotela ngalinye nokungena kwe-resort. Kukhona i-Sky Train (i-monorail) ehambisa izivakashi ukuya futhi kusukela ekungeneni kwe-resort kuya ku-Entertainment Center ngezimpelasonto kanye namaholide omphakathi.